Bafuna athathelwe izinyathelo u-Bathabile Dlamini | Eyethu News
Bafuna athathelwe izinyathelo u-Bathabile Dlamini
“Abe-Youth League abamuzwa kahle umengameli.”
UNgqongqoshe wekuThuthukiswa koMphakathi uNkk Bathabile Dlamini. Isithombe : City Press
UPHIKO lwentsha kwinhlangano ye-ANC esifundeni i-Greater KwaDukuza Region seluphumele obala lwathi kufanele kuthathwe izinyathelo eziqinile zibhekiswe kuNgqongqoshe wezokuThuthuthukiswa koMphakathi uBathabile Dlamini.
Lokhu kulandela ukudideka okuke kwaba khona mayelana nenkontileka yokukhokhela abahola izibonelelo zikahulumeni.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kube nelikhulu ixhala ngesikhathi kuvela imibiko yokuthi inkontileka phakathi kwenhlangano i-South African Social Security Agency (SASSA) kanye nenkampani i-Cash Paymaster Services (CPS) iyaphela mhla zingu-31 kwephezulu, nokuqubule ungabazane ngokuthi ngubani ozokhokhela labo abahola izibonelelo zikahulumeni mhla zizinye ngenyanga ka-April.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi ngonyaka ka-2014, inkantolo yomthethosisekelo yakhipha isinqumo sokuthi inkontileka phakathi kwenkampani i-CPS kanye ne-SASSA yabe ingekho emthethweni. Nokho inkantolo yabuye yasimisa isinqumo sayo, njengengxenye yemizamo yokugwema ukuthi kungaphazamiseki ukukhokhelwa kwezibonelelo.
Inkantolo yajuba uMnyango kaNgqongqoshe Bathabile Dlamini ukuthi uthole inkampani entsha ezobhekana nomsebenzi wokusabalalisa izibonelelo, nokho lokhu akuzange kwenzeke, kuze kube yimanje.
Ngeviki eledlule unobhala we-Youth League esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnuz Thanduyise Sabela uye waphumela obala wathi uphiko lwakhe lubona ukuthi kufanele akhishwe esikhundleni uNgqongqoshe uDlamini ngoba wehlulekile ngukusingatha lolu daba ngendlela efanele. Ngosuku olufanayo uMengameli uJacob Zuma, ngesikhathi ephendula imibuzo ephalamende, uye wama ngelokuthi akukho okubi osekwenziwe nguNgqongqoshe Dlamini, wathi ngeke aze amuthathele izinyathelo.
Usihlalo wophiko lwentsha esifundeni i-Greater KwaDukuza uMnuz Mfanafuthi Ngcobo uthe bona njengabantu abasha bayamesekela uMnuz Sabela, wathi akukwazi ukuthi kungathiwa umuntu oye wahluleka wancama ukuthola inkampani entsha esikhathini esiyiminyaka emithathu “akukho okubi asekwenzile”.
“Thina sithi noma ngubani ongakwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele kufanele avezwe obala futhi athathelwe izinyathelo. Asiphikisani nokushiwo ngumengameli, kodwa sithi iminyaka emithathu miningi kakhulu ukuthi umuntu angahluleka wukuthi umnyango wakhe ulandele umyalelo ocacile wenkantolo. Yingakho sithi uNgoqngqoshe Bathabile Dlamini kufanele athathelwe izinyathelo,” kubeka uMnuz Ngcobo.
Inkampani i-CPS isinikezwe omunye unyaka ukuthi iqhubeke nokusabalalisa izibonelelo zikahulumeni, kodwa ngaphansi kwemibandela eqinile. UMengameli Zuma yena umi ngelokuthi ngeke akwazi ukuthathela uDlamini izinyatheleo ngoba akayiboni into embi ayenzile. Nokho ihhovsi likamengameli liye lakhipha isitatimende esibhekiswe kuzwelonke ngempelasonto sokuxolisa ngedidane eye yadalwa wulolu daba.